Ingobo yomlando yokuqapha - Amalungelo abantu nobuciko bokukhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Izindaba ziyavela futhi zisabalale emhlabeni wonke njalo ngomzuzwana. Ngemuva kwezinye izindaba, umhlaba ubonakala uguquka ngokwehlukile kunakuqala. Izindaba zithinta izimpilo zethu. Sivuka nawe futhi sikuthathe siye ebusuku. Akunandaba ukuthi ukuphi emhlabeni nganoma yisiphi isikhathi, uvemvane lushaya amaphiko alo. Futhi kungavela okuthile okunencazelo kithi. Ubuchwepheshe besimanje buwenze umhlaba waba mncane. Kepha izingxabano zesifunda nezomhlaba zibonakala zikhula. Abaningi bazibuza ukuthi ubani ongamethemba. Imiphi imininingwane esenokwethenjelwa nokuthi ukuthula nokuchuma eJalimane kuyaqhubeka yini. Yilapho-ke lapho umsebenzi wethu uqala khona. Futhi kunethiwekhi yamazwe omhlaba sakha izisekelo ezinokwethenjelwa, kwesinye isikhathi zisengozini enkulu, ngoba kuthatha ubude bengalo ngaphambili ukwenza ngokuzibophezela. Inamba futhi izinikele ngokwethembeka kubantu ukuvikela iJalimane.
Faka isicelo manje - ukuthola umhlaba onemibala eminingi!